ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “Burma VJ - Myanmar through the lens”
ဟုတ်ပ အရင်တခေါက် ရုံးအပြန်အမီပြေးလာတာ မမီလိုက်ဖူး .. ဒီတစ်ခေါက်တော့ MC ယူပီးသွားကြည့်မယ်။ ကျေးဇူး ကျေးဇူး
Bro, thanks for info.
Ko Paw, forgot tobcurious why u r so quiet?
I got4tickets already on Wed. :P